Fifidianana: Tatitry ny fanaraha-maso amin'ny fanajana ny Dina ataon'ireo Kandida ho Filoham-pirenena
samedi, 20 octobre 2018 10:18
Ity fanarahamaso ny fanajana ny Dina ity dia mifototra amin’ireo tranga misy, izay voamarina ny fisiany eo amin’ireto loharano ireto :
- Fampitam-baovao : an-tsoratra sy fahitalavitra
- Antso amin’ny alalan’ny laharana maitson’ny Tetikasa FANDIO
- Filazana avy eo amin’ny Rantsa-mangaikan’ ny Komity eny ifotony
- « Plateforme d’alertes précoces » arindran’ny Tetikasa PEV : www.alerte.pevmadagascar.eu
- Asan’ny Mpikambana mandrafitra ny Komity, anisan’izany ny « Initiative pour la transparence financière » na hetsika hangatahana mangarahara ara-bola izay ataon’ny TI IM, ka hikatona amin’ny faha 31 Oktobra 2018.
Ireo Kandidà voakasiky ny fanarahamaso:
Arahina avokoa ireo kandidà rehetra na ireo izay nanao sonia, eny na ireo izay tsy nanao sonia ny Dina. Antony, miankina amin’ny fanajan’izy ireo fitsipika no hisian’ny fitoniana sy ny fahamarinan’ny fifidianana, fototry ny fahatokisan’ny mpifidy.
Na izany aza, dia ho asongadina manokana ireo kandidà nanao sonia ny Dina eo amin’ny lafin’ny fanajana azy.
Vokatry ny fanarahamaso:
Ireo Kandidà izay hita fa tsy nanaja ny Dina sy/na manana fihetsika tsy mendrika :
Fepetra tsy voahaja na fihetsika tsy mendrika (jereo ny Dina azafady)
12. Rajaonarimampianina R. Hery M.
Fanairana sy fanentanana:
Ny Komitin’ny Dina dia mampatsiahy an’Andriamatoa RAJAONARIMAMPIANINA Hery fa nanao sonia ny Dina izy. Noho izany manana adidy hanaja an’io Dina io. Eo anatrehan’ireo fandikana isan-karazana sy voaporofo (fizarana entana, fampiasana ny fitaovam-panjakana, fanomezana vahana bebe kokoa ny fialamboly toy izay ny adihevitra mitondra fivoarana sy fanatsarana), dia miantso sy manentana azy ny Komity mba hanaja ny sonia izay nataony.
Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina, tsy nanao sonia ny Dina, kanefa voafehin’ny fotokevitra mitondra amin’ny fifidianana madio sy milamina. Ireo mantsy no tokony fototry ny lalàna izay tokony hankatoavin’ny kandida rehetra.
Eo anatrehan’ny fihetsika tsy mendrika isan-karazany izay voaporofo (fizarana vola, fandaniam-bola mihoam-papana sy tsy ampiheverana manoloana ny fahantrana mangitsokitsoka, ny fanomezana vahana bebe kokoa ny fialamboly toy izay ny adihevitra mitondra fivoarana sy fanatsarana, ny tsy fanajana ny lalam-pifidianana momba ny lisi-pifidianana) dia miantso sy manentana azy ny Komity mba hanana fihetsika mandala ny etika sy ny lalàna. Ireo antoky ny fitoniana eo amin’ny zotram-pifidianana. Entanina koa izy mba hifehy tsara ny mpanaradia azy eo amin’ny lafin’ny herisetra sy ny fitandroana ny fananam-bahoaka.
Manentana toa izany an ‘Andriamatoa Ravalomana Marc koa ny Komity mba hifehy ireo olona manaraka azy, hanana fihetsika mandala ny filaminana. Voarara mafy ireo eo anatrehan’ny lalàna, ary indrindra tsy manaja velively ny soatoavintsika Malagasy.